Faahfaahinta weeraradii xalay iyo Muqdisho.
Faahfaahinta weeraradii xalay (Jimce) ee Muqdisho.
Ankunda oo ka deyriyay xaalada Somalia.
Wariye lagu dilay gobalka Gedo.
Sheekh Shariif oo beeniyay in Maxkamadaha ay ka dambeyaan dilalka Muqdisho ka dhaca.
Weerar kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa xalay ka dhacay qeybo kamid ah Muqdisho, kuwaaso lagu qaaday ciidamada Dowlada Federaalka iyo kuwa Itoobiyaanka ee caasimada ku sugan.
Xalay abaarihii 9:30 fiidnimo waxa kooxo hubeysan ay weerar loo adeegsaday bambaano ay ku qaadeen ciidamada Dowlada KMG ah oo ku sugnaan qeybo ka tirsan degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho.
Dagaalkaan ayaa labada dhinac waxa ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo ciidamada ay fureen rasaas xoogan sida caadata u aheyd in muddo ah.
Dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda ayaa si weyn u hareeyay muddo saacado ah agagaarka Isgoyska SOS, Shineemo Cabdi Waayeel iyo warshaddii hore ee Barafuunka. Halkaasi oo fariisin u ah ciidamada dowladda sida uu shabelle u sheegay Cabdi Salaan oo ka mid ah dadka deegaanka.
Deeqo Xasan oo kamid ah marwooyinka ku dhaqan xaafada SOS ee magaalada Muqdisho ayaa saakay qadka telefoonka iigu xaqiijiyay in garaash ku yaala xaafada SOS ay ku dhaceen madaafiic ay tuureen ciidamada Dowlada halkaasi laba wiil oo ilaalo ka ahaa garaashka ku dhaawacmeen halka gawaari kor u dhaafeysa toddobo la xaqiijiyay in burbur xoogan uu soo gaaray.
Deeqo waxay sheegtay in madaafiicda intooda badan ay soo tuureen ciidamada Itoobiyaanka oo markii laga itaalka roonaaday ciidamada DF sida ay sheegtay kusoo biiray dagaalka.
Dhinaca kale, weerar aad u abaabulnaa ayaa xalay saqdii dhexe lagu qaaday Xeradii Guulwadayaasha iyo rugtii saraakiisha halkaasi oo fariisin u ah ciidamada dowladda KMG ah.
Rasaas xoogan ayay labada dhinac is weydaarsadeen iyadoo ay kusoo biireen dagaalka ciidamada Itoobiyaanka ee fariisimada ku leh xarunta wasaaradii hore ee Gaashaandhiga.
Dagaalka labada dhinac xalay dhex maray ayaa la sheegay inuu socday muddo hal saac iyo dhowr daqiiqo ah, iyadoo labada dhinacba aysan waxba kala harin.
Gaashaanle C/waaxid Max�ed Xuseen oo ciidamada dowlada dhinaca Warfaafinta u qaabilsan ayaa Saxaafada u xaqiijiyay in labadii dhinac ee xalay dagaalamay qasaaro soo gala gaartay.
C/waaxid waxuu xaqiijiyay in ciidamada booliska ay kaga dhaawacmeen labo askari, isagoo sheegay in ay ka dileen kooxihii weerarka soo qaaday ilaa 7 ruux oo sida uu sheegay Meydkooda halkaasi uu yaalo, dhawaana Saxaafada la tusi doono.
Weerarada ka dhacay xiliya habeenii caasimada Somalia ee Muqdisho oo lala beegsado ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Dowlada KMG ah ayaa habeenadii ugu dambeeyay si tartiib tartiib ah usii xoogeysanayay taasoo inta badan ay qasaaro kasoo gaarto dadweynaha shacabka ah ee caasimada ku dhaqan.
Captain Paddy Ankunda afhayeenka ciidamada Midowga Afrika ee dalka Somalia ayaa raja xumo ka muujiyay xaalada iminka ay taagan tahay dalka Somalia gaar ahaan magaalada Muqdisho ay joogaan ciidamo ka socda Midowga Africa.
Ankunka waxa uu yiri �xiligaan kama jirto Somalia nabad la ilaaliyo si lamid ah meelaha kale ee colaadaha ka jiraan ee Afrika�.
Ankunka oo wareysi siiyay jariirada the Monitor ee ka soo baxa dalka Uganda ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu xiriir la sameeyay Xoghayaha QM Ban Ki-moon isla markaan uu weydiistay inay soo dedejiyaan qorshayaal lagu nabadeynayo Somalia.
Ankunda waxa uu ku dooday in Q.M ay ciidamo u dirto meel ay nabadi ka jirto, waxaana la iska iloobay buu yiri ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ay keeneen Somalia, Q.M iyada ayaana cunaqabateysay Midowga Afrika ayuu yiri Ankunda.
afhayeenka ciidamada Midowga Afrika ee dalka Somalia waxa kale oo uu sheegay in wafdi ka socda Burundi ay imaan doonaan Somalia. dhowaan si ay u qiimeeyaan halka ciidamooda la dhigi doono, taasoo buu yiri waxay war wanagsan u tahay dadka Soomaaliyeed.
�Ciidamada Uganda ka socda ee xiligaan jooga Muqdisho, waxa ay qabteen arrimo badan oo dhinaca gargaarka shacabka dhibaateysan u badan balse nabad aan ilaalino ilaa hada waan garan la sanahay� ayuu yiri Ankunka
Hadalka Captain Paddy Ankunda afhayeenka ciidamada Midowga Afrika ee dalka Somalia ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada AMISOM ka socda ee Muqdisho jooga aysan ilaa hada qaban waxyaabo ammaanka lagu sugayo oo la taaban karo iyagoo ilaalo ka haya oo kaliya Airport Muqdisho, Dekada iyo xarunta Madaxtooyada Villa Somalia.
Wariye Cabdiqaadir Mahad Macalin �C/qaadir Kaskeey� ayaa xalay ku geeriyooday tacsiirad ay kooxo dableey ah ku fureen gaari uu la socday oo ka baxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Baardheere ee gobalka Gedo.
Allaha u naxariistee Wariye Kaskeey ayaa u geeriyooday rasaas ku dhacday, iyadoo meydkiisa la keenay magaalada Baardheere oo saakay lagu aasay.
Wariyaahaan geeriyooday ayaa waxa uu u shaqeyn jiray dhowr Idaacadood, oo ay ka mid yihiin Idaacadda Man-deeq (Beled-xaawo), Radio Banaadir (Mogadishu) iyo Radio Daljir (Gaalkacayo)
Weriye Kaskey ayaa marka uu geeriyoonayay waxa uu ka yimid Muqdisho halkaasi oo uu kaga soo qeyb-galay Tababar Saxaafadeed oo sare loogu qaadayey Aqoonta Weriyayaal ka kala socday Warbaahinta madaxa bannaan ee ka furan magaalladda Muqdishu iyo Goballadda dalka Somalia.
Arimahaan ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli maalmihii la soo dhaafay kooxo dableey ay ku soo badanayeen wadooyinka gobolka Gedo, kuwaasi oo dhibaato u geysta had iyo jeer dadka iyo gaadiidka safarka ah.
Dilka Weriyahaasi, ayaa waxay tiradda Suxufiyiinta sannadkan lagu dilay gudaha dalka Somalia ka dhigaysaa 7-Weriye, oo aay ugu dambeeyeen Allaha U Naxariistee Marxuuminta kala ah Cali Iimaan Sharma�arke iyo Mahad Axmed Cilmi oo iyagu bishan 11-dii lagu dilay magaalladda Muqdsihu.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Guddoomiyaha golaha fulinta Maxkamadaha Islaamiga Somalia ayaa beeniyay in Maxkamadaha ay ka dambeeyaan dilalka abaabulan ee waayadii ugu dambeeyay kusii baahay magaalada Muqdisho.
Sheekh Shariif waxa uu sheegay in Maxkamadaha ay yihiin rag nabadeed aysan marnaba dooneyn inay si qalad ah u galaan dhiiga qof muslim ah.
�Maxkamadaha islaamka ma ahan kuwo laaya dadka rayidka ah, waxaadna ku ogaan kartaan in markii aan ka talin jirney Muqdisho aanu sidaasi dhici jirin" ayuu yiri Sheekh Shariif oo si weyn u cambaareeyay dilalka ka dhaca caasimadda.
Sheekha ayaa ku eedeeyay dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho inay ka dambeeyaan Madaxda sar sare ee Dowlada KMG ah iyo Saraakiisha ciidamada Itoobiyaanka.
Guddoomiyaha golaha fulinta Maxkamadaha Islaamiga Somalia ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in dadkii rayidka ahaa ee laga barakiciyay magaalada Muqdisho lagu tilmaamo argagixiso, isagoo sheegay in arinkaasi uu tahay mid qaldan.
�Waxaa wax laga xumaado ah nin sheeganaya inuu mas�uul ka yahay shacabka gobalka Banaadir, inuu shacabkii uu isaga qaxiyay hadana ku tilmaamo argagaxiso, waana fakir ay wada qabaan dhamaan dadka ku bahoobay Dowlada Cabdulaahi Yuusuf waana fakir uu kor ka maamulayo Meles� ayuu yiri Sheekh Shariif.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka Sheekh Shariif ayaa kusoo beegmaya xili dhawaan madaxda sar sare ee DF ku eedeeyeen Maxkamadaha Islaamiga inay ka dambeeyaan dilalka abaabul ee ka dhacaya Muqdisho.